ဒီဓာတ်ပုံကို ဂျိုးဘိုင်ဒန် သမ္မတမဖြစ်မီ ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပုံထဲက ကလေးဟာ ဂျော့ချ်ဖလွိုက်ရဲ့ သား မဟုတ်ပါဘူး | သတင်းအချက်အလက်စိစစ်မှု
ဒီဓာတ်ပုံကို ဂျိုးဘိုင်ဒန် သမ္မတမဖြစ်မီ ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပုံထဲက ကလေးဟာ ဂျော့ချ်ဖလွိုက်ရဲ့ သား မဟုတ်ပါဘူး
Sophie STUBER, AFP ပြင်သစ်, AFP ထိုင်း ပုံနှိပ်ဖော်ပြသည့်နေ့စွဲ အင်္ဂါ3သြဂုတ် 2021 အချိန် 10:28
အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်က ရဲဖမ်းဆီးမှုတစ်ခုအတွင်း သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ လူမဲအမျိုးသား ဂျော့ချ်ဖလွိုက်ရဲ့သားဖြစ်သူရှေ့မှာ ဒူးထောက်ပြီး သူ့ဖခင်သေဆုံးမှုအတွက် တောင်းပန်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို Facebook ပေါ်မှာ အကြိမ်ရေထောင်နဲ့ချီမျှဝေခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအဆိုက မှားပါတယ်။ အဲဒီဓာတ်ပုံကို ဘိုင်ဒန်ရဲ့ သမ္မတမဖြစ်မီ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုကာလအတွင်း ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ဓာတ်ပုံထဲက ကလေးဟာလည်း သေဆုံးသူဖလွိုက်ရဲ့သား မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီပို့စ်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်က Facebook ပေါ်က ဒီလင့်ခ်မှာ တင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြန်လည်မျှဝေတဲ့အကြိမ်ရေ ၁၅,၀၀၀ ကျော် ရှိခဲ့ပါတယ်။
နားလည်မှုလွဲစေနိုင်တဲ့ ပို့စ်ကို ဩဂုတ်လ ၂ ရက်က ရိုက်ယူခဲ့တဲ့ screenshot
ဓာတ်ပုံနဲ့အတူ ပို့စ်ကို အခုလိုရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
“ဒူးထောက်တောင်းပန်နေတာက အမေရိကန်သမ္မတကြီး ဂျိုးဘိုက်ဒန်။ ရပ်နေတဲ့ ကလေးလေးက ဂျော့ဖလွိုက်ရဲ့ သား။ ဟုတ်ပါတယ်။ ရဲတပ်သားလက်ချက်ကြောင့် အသက်ဆုံးရူံးသွားရတဲ့ အမေရိကန်လူမည်း"ဂျော့ဖလွိုက်"ရဲ့ သားလေးကို အမေရိကန်သမ္မတကြီး ဂျိုးဘိုက်ဒန်က ဒူးထောက်တောင်းပန်နေတဲ့ ပုံပါ။ မှားနေရင် ရှင်ဘုရင်ကတောင် အညတရလေးကို ဒူးထောက် တောင်းပန်ပါတယ် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို တန်ဖိုးထားတတ်တာ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတွေမှာပဲရှိပါတယ်။”(မူရင်းသတ်ပုံ)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တပ်မတော်က အရပ်သားအစိုးရထံကနေ အာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့နောက် နိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့အတူ နိုင်ငံတွင်းက ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ် ဝေဖန်မှုတွေ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး အခုလို နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ဝေဖန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်း အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ် ပျံ့နှံ့လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ် ဖလွိုက် သေဆုံးမှုကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ Black Lives Matter လှုပ်ရှားမှုကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံအနှံ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေလည်း ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ လူဖြူရဲအရာရှိတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒဲရစ်ချော်ဗန် (Derek Chauvin)ဟာ ဖလွိုက်ကို ဖမ်းဆီးဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူရဲ့လည်ပင်းပေါ် ကိုးမိနစ်ကျော်ကြာ ဒူးခေါင်းနဲ့ဖိပြီး ဖမ်းချုပ်ခဲ့တာကြောင့် ဖလွိုက်သေဆုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖလွိုက်ကို ဖမ်းဆီးစဉ် လည်ပင်းကို ဒူးနဲ့ထောက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဟာ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး ချော်ဗန်ဟာ လူသတ်မှုနဲ့ တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက် ချော်ဗန်ကို လူသတ်မှုအတွက် ထောင်ဒဏ် ၂၂ ကျော်ကျခံဖို့ တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ဒီ AFP သတင်းမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
အလားတူပို့စ်တွေကို Facebook ပေါ်က ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ် နဲ့ ဒီလင့်ခ်တွေမှာလည်း တင်ထားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီအဆိုဟာ မှားယွင်းပါတယ်။ ဒီဓာတ်ပုံထဲက ကလေးဟာ ဖလွိုက်ရဲ့သားမဟုတ်ဘဲ ဘိုင်ဒန်သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ အဝတ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့သား ဖြစ်ပါတယ်။
Detroit မြို့က အဝတ်ဆိုင်မှာ ရိုက်တဲ့ပုံ
Google ပေါ်မှာ ဓာတ်ပုံရာဇဝင်ရှာကြည့်တဲ့အခါ မူရင်းဓာတ်ပုံကို နိုင်ငံတကာဓာတ်ပုံအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Getty Images ဝဘ်ဆိုဒ်ရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
ဓာတ်ပုံရဲ့ပုံစာအရ အဲဒီဓာတ်ပုံကို ဓာတ်ပုံဆရာ Chip Somodevilla က ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ ပုံထဲမှာ ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာ Detroit မြို့က “Three Thirteen” အဝတ်ဆိုင်ပိုင်ရှင် Clement Brown ရဲ့သားဖြစ်သူ C.J. Brown လို့ ခေါ်တဲ့ကလေးငယ်ကို စကားပြောဖို့ ဒူးထောက်နေတဲ့ပုံဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဘိုင်ဒန်ဟာ Michigan ပြည်နယ်ကို မဲဆွယ်စည်းရုံဖို့ရောက်ရှိစဉ်ကာလအတွင်း သူ့မြေးတွေအတွက် ဈေးဝယ်ဖို့ အဲဒီစတိုးဆိုင်ကို ရောက်ခဲ့တာပါ။ နောက်ထပ် Getty Images ပုံတစ်ပုံထဲမှာ ဘိုင်ဒန်ဟာ ဆိုင်ရှင် Clement Brown နဲ့ လက်သီးချင်းတိုက်ပြီး နှုတ်ဆက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။
AFP ရဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာ Jim Watson ကလည်း အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပြီး သူ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံထဲမှာ ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ မီးခိုးရောင်အင်္ကျီဝတ်ထားတဲ့ ဆိုင်ရှင် Clement Brown ကို တွေ့ရပါတယ်။
Democratic Presidential Candidate Joe Biden speaks C.J. Brown (R), the owner's son, as he shops for his grandkids at the Three Thirteen store in Detroit, Michigan, on September 9, 2020. ( AFP / JIM WATSON)
အဲဒီဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ရက်တည်း ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ နောက်ထပ် AFP ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာ အဝတ်စင်တစ်ခုနားမှာ အဝတ်အစားတွေကိုင်ပြီး ဒူးထောက်နေတဲ့ ဘိုင်ဒန်ကို မြင်နိုင်သလို၊ အမည်မသိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နောက်မှာ မီးခိုးရောင်ထရပ်ဆုအားကစားဝတ်စုံ၊ သုံးရောင်ခြယ်ဖိနပ်ဝတ်ပြီး ရပ်နေတဲ့ ကလေးငယ်ကိုလည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်။
Democratic Presidential Candidate Joe Biden talks withayoung boy as he shops at the Three Thirteen store in Detroit, Michigan, on September 9, 2020. ( AFP / JIM WATSON)
ရွေးကောက်ခံသမ္မတ ဘိုင်ဒန်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီအဝတ်စတိုးကို ရောက်ရှိစဉ် ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုလည်း သူရဲ့ တရားဝင် Instagram စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဓာတ်ပုံရဲ့ ပုံစာမှာ ကလေးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ လွတ်လပ်မျှတတဲ့စနစ်တစ်ခုရဲ့အရေးပါပုံအကြောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
BLACK LIVES MATTER ဂျော့ချ်ဖလွိုက်